आहा ! रारा गोल्ड कपको फाईनल आज : भाग्यशाली मनाङ कि पुलिस ? - Parichay Network
आहा ! रारा गोल्ड कपको फाईनल आज : भाग्यशाली मनाङ कि पुलिस ?
परिचय नेटवर्क द्वारा	 १ चैत्र २०७६, शनिबार ०७:५० मा प्रकाशित
पोखरा, १८ औं आहा ! रारा गोल्ड कपको उपाधी उचाल्न एक खुटकिलो मात्रै बाँकी रहँदा दुबै टिमले उपाधी उचाल्ने दावा समेत गरिरहेका छन । क्याराभान कप देखि १८ औं आहा रारा सम्म धेरै पटक सहभागिता जनाएका यि दुई टिमलाई उपाधी उचाल्दै शाख जोगाउन पनि उत्तिकै चुनौती छ ।
नगद १० लाख सहित आहा ! रारा गोल्ड कप मोफसलकै उत्कृष्ट फुटबल प्रतियोगिता मध्येको एक हो । नेपालमा व्यवसायिक फुटबलको जग बसाल्न आहा ! राराको महत्वपुर्ण भुमिका रहेकोले यो उपाधी सबैका लागि उत्तिकै महत्व राख्दछ ।
नेपाली फुटबलको लामो इतिहास बोकेको विभागिय नेपाल पुलिस क्लब र नेपाली ब्यवसायिक फुटबलको परिदृश्यमा संधै चर्चा परिचर्चामा रहने क्लब मनाङ मर्स्याङदी क्लब यो फाइनल भिडन्तमा छन ।
नेपाली फुटबलको इतिहास केलाउने हो भने दुबैको उत्तिकै महत्व छ र फुटबल मैदानमा यि दुबै टोलीको पदर्शन फिफ्टी–फिफ्टीको हुन्छ । स्पिड संगै पावर गेम खेल्ने पुलिस र छोटो पास संगै टेक्निकल गेम खेल्ने मनाङ, यि दुबै टोलीको खेलहरु संधै उत्तिकै संघर्षपुर्ण र हेर्न लायक हुन्छन ।
क्याराभान कप देखि १८ औं आहा रारा सस्करण सम्म नेपाल पुलिस सबै भन्दा धेरै पटक ८ पटक फाइनल यात्रा तय गरेको छ । १७ औं सस्करण सम्म नेपाल पुलिसको टिमले क्याराभान कप देखि हाल सम्म ६ पटक उपाधी जितेको छ । यस्तै ९ पटक उपाधीका लागि भिडेको मनाङले ५ पटक उपाधी उचालेको छ ।
मनाङ र पुलिस क्याराभान कप देखि १८ औं आहा रारा सस्करण सम्म तिन पटक फाइनलमा उपाधीका लागि भिडेका छन । तिन पटक फाइनलमा भेट भएका यि दुई टिम मध्ये मनाङले पुलिसलाई २ पटक उपाधी खोसेको छ भने क्याराभान कपमा पुलिसले बाजी मारेको थियो । क्याराभान कप पोखराको ब्यवसायिक फुटबलको सुरुवाती क्षण थियो ।
क्याराभान कपको फाइनलमा मनाङ पुलिस संग २–१ ले पराजित हुँदा दोश्रो र तेश्रो आहा रारामा क्रमश ३–१ र ३–२ गोलले पराजित गर्दै मनाङले पुलिस संग क्याराभान कपको बदला लिएको छ । मनाङ र पुलिसका लागि पोखराको फुटबल मैदान भाग्यशाली मैदान हो । आहा रारा गोल्ड कपमा सबै भन्दा धेरै पटक उपाधी उचालेको पुलिसले पाँच पटक उपाधी उचालेको मनाङ संग १८ औं सस्करणमा पुनः भेट भएको छ ।
शनिबार हुने खेलको विश्लेषण गर्दै फुटबलका प्रशिक्षक शम्भु केसी मनाङ र पुलिस विचको खेल ६०–४० को हुने बताउँछन । त्यसमा पनि मनाङ हावीहुने उनको भनाई छ । उनले भने–“मनाङ यतिबेला फुटेर जुटेको टिम हो, त्यसैले यो सन्तुलित छ,” उनले थपे–“धेरै पासेसमा भन्दा इनकाउन्टरमा बढी गोल हुने चान्सेस छ ।” मनाङले अन्जन विष्ट र पुलिसले भरत शाहलाई गोल गर्ने अवसर जुटाउन प्रयास फाइनल खेलमा देखिने उनको भनाई छ ।
मनाङले आर्मी जस्तो उत्कृष्ट टिमलाई सेमीफाइनलमा पराजित गरेर फाइनल यात्रा तय गरेको हुनाले कम आँक्न नमिल्ने केसीको भनाई छ । यता पुलिस पनि उत्तिकै उत्कृष्ट टिम भएकोले खेल रोमाञ्चक हुने उनले बताए । पोखरेली दर्शकले राम्रो खेल्ने फुटबल टिमलाई नै संधै सर्मथन गर्ने रोचक इतिहास रहेकोले पनि भोलीको खेल जसले राम्रो खेल्छ दर्शक पनि त्यही टिमको सर्मथनमा रहने प्रशिक्षक केसीले बताए ।